YEYINTNGE(CANADA): Sunday, May 18
မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီနိုင်ရန်အတွက် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များ လိုအပ်ပြီ
အကူအညီပေးအပ်ရန် အမှန်ပင် လိုအပ်နေသော်လည်း ၎င်းပြဿနာများဖြစ်စေသည့် ပင်မအကြောင်းအရင်းများကိုမူ မျက်ကွယ်ပြုမထားသင့်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုကပ်ဘေးဒုက္ခများသည် လူသားများက ဖန်တီးထားသည့် ကပ်ဘေးဒုက္ခများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့် ညံ့ဖျင်းလှသည့် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၏ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အထူးတာဝန်ရှိနေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာ ရေးကဏ္ဍများတွင် နိုင်ငံ၏ အသုံးစရိတ် ဘတ်ဂျက်ကို တိုးမြှင့်ချပေးရမည့်အစား စစ်အစိုးရက ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ နှင့် စစ်ယန္တရားများသာ ပိုမိုဝယ်ယူ ဖြည့်ဆည်းနေပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) ၏ခန့်မှန်း ချက်အရ မြို့တော်သစ်နေပြည်တော် ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်နေသည့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၂ သန်းနှင့် ၂၄၄ သန်းကြားတွင် ရှိနိုင်သည်ဟု တွက်ချက်ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တပ်မတော်တွင်းရှိနေသည့် အရာရှိနှင့် စစ်သည် ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို ထောက်ပံ့ပေးနေရသည့်အတွက် စစ် အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတွင် လိုအပ်နေသည့် အချက်၊ စာရင်းရှည်ကြီး ရှိနေနိုင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များတွင် စစ်အစိုးရက တရုတ်နိုင်ငံမှ စစ်သင်္ဘောများ၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ တင့်ကားများ၊ မစ်-၂၉ ဂျက် တိုက်လေ ယာဉ်များ၊ ရုရှားနိုင်ငံမှ အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုများ ၀ယ်ယူခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် တွက်မည်ဆိုလျင် ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံမျှ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသား ဘဏ္ဍာငွေအသုံး၏ ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ကို ကာကွယ်ရေး ကိစ္စများအ တွက် သုံးစွဲနေခဲ့ပါသည်။
ဤငွေများကို ကျန်းမာရေး အပါအ၀င် တခြားကဏ္ဍများတွင် သုံးစွဲခဲ့ပါက မည်မျှကောင်းလိမ့်မည်နည်း။ ပြည်သူအများ၏ လူနေမှု ဘ၀များတိုးတက်စေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါလော။ လက်ရှိအချိန်တွင်မူ အမျိုးသားဘဏ္ဍာငွေ သုံးစွဲမှု၏ ၃ရာခိုင်နှုန်း ကိုသာ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် လျာထားသုံးစွဲနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
မကြာသေးမီက ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) က ထုတ်ပြန်ကြေညာရာတွင် ၎င်းအဖွဲ့အနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၁.၇ သန်းကို လာမည့် ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း စားရေရိက္ခာ ကူညီပေးရန်အတွက် သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒုက္ခရောက် နေသူ မြန်မာပြည်သူ ၁. ၆ သန်းအထိကို ကူညီနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပါရှိခဲ့သည်။
အမှန်တကယ် အကူအညီ လိုအပ်နေကြသူများအတွက် အကူအညီ တိုးမြှင့်သင့်သည်မှာ မှန်သော်လည်း နိုင်ငံခြား သားများ ၏ လစာများ၊ မလိုအပ်သည့် အကြံပေးဉာဏ်ပူဇော်ခများ၊ စစ်အစိုးရ အိပ်တွင်းရောက်စေမည့် လာဘ်ပေးမှုများ ဖြင့် ဖောင်းပွ၍ အလဟဿ မဖြုန်းတီးစေသင့်ပါ။ မိမိတို့ သေချာရှင်းလင်းနေရမည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲ မွဲတေမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကပ်ဘေးဒုက္ခများကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ဖန်တီးထားသည် ဆိုသည့် အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံ တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပြဿနာများနှင့် စစ်မက်ပဋိပက္ခ များကို မဖြေရှင်းနိုင်မချင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဗြိတိန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြား အစိုးရများထံမှ အကူအညီများ ဆက်လက်လိုအပ်နေလိမ့်ဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် သံသရာလည်၍မဆုံး ဖြစ်နေနိုင် ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲမွဲတေနေကြသူများနှင့် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေကြသူများအတွက် အကူအညီ တိုးမြှင့်ပေးနေစဉ်မှာ ပင် နိုင်ငံတကာမိသားစု အနေဖြင့် စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လာစေရေးအတွက် ဖိအားကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/18/20080အကြံပြုခြင်း
Myanmar Kids May Starve, Charity Says, as Asean Meets (Update2)
May 18 (Bloomberg) -- Thousands of children in cyclone-hit Myanmar are starving and may die unless aid arrives,aBritish charity warned,aday before nations from around the region hold an emergency meeting to discuss the humanitarian crisis.
``Children may already be dying asaresult ofalack of food,'' Jasmine Whitbread, chief executive of Save the Children UK, said today inastatement. An estimated 30,000 children less than five years old were malnourished before the storm struck and several thousand could perish within three weeks, it said.
Myanmar has accepted onlyatrickle of the help offered since the storm on May 3, barring most foreign staff and rejecting offers of helicopters and boats. China is backing Myanmar as it resists pressure from the U.S. and other nations to accept more assistance, saying countries must show ``due respect.''
Foreign ministers from the Association of Southeast Asian Nations will tomorrow hold an emergency meeting in Singapore to discuss the disaster. Rainfall in Myanmar was increasing the risk of water-borne diseases, World Vision Australia warned today.
``We want to push forward to help as much as possible,'' Tharit Charungvat,aspokesman for Thailand's foreign ministry, said by telephone today from Bangkok. ``We have to assess their needs, and we hope to do that tomorrow,'' Tharit said.
British Prime Minister Gordon Brown accused Myanmar's military regime yesterday of creatinga``man-made catastrophe'' with the refusal to accept international help. There wasarisk of ``a true crime against humanity,'' according to Jean-Maurice Ripert, France's envoy to the United Nations,
``Many children in the affected areas are now suffering from severe, acute malnourishment, the most serious level of hunger,'' Save the Children's Whitbread said. ``When people reach this stage they can die inamatter of days.''
The cyclone is the worst natural disaster to hit Southeast Asia since the 2004 Indian Ocean tsunami, which killed more than 220,000 people. The death toll from the storm has reached almost 78,000, the Associated Press cited Myanmar state television as saying. An additional 56,000 people are missing.
``The scale of this is just extraordinary and two weeks on, we're only still coming to grips with its power,'' Tim Costello, chief executive officer of World Vision Australia, told Sky News Australia today. ``We are talking aboutamajor food scarcity,arice crisis, in the future.''
The Irrawaddy delta, Myanmar's main rice-growing area, was the hardest hit by the cyclone and the country may have to rely on imports until 2009, Save the Children UK said. The charity will send seeds to farmers whose lands are no longer flooded, it said.
Asean, formed in 1967, groups Brunei, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, Laos, the Philippines, Malaysia, Cambodia as well as Myanmar, which was admitted in 1997. Myanmar, which used to be known as Burma, hasapopulation of about 48 million.
The grouping should ``insist that the Myanmar authorities allow unrestricted access'' for aid workers, the Asean Inter- Parliamentary Myanmar Caucus President Kraisak Choonhavan said inastatement. ``Asean must show leadership and act responsibly'' to ensure aid reaches survivors.
Still, Singapore Foreign Minister George Yeo said the outcome of tomorrow's meeting was unlikely to be ``dramatic,'' according toareport today in the Sunday Times, citing Yeo. There must be respect for ``the autonomy of countries,'' Yeo was cited as saying after he met with China's Foreign Minister Yang Jiechi.
United Nations emergency-relief coordinator John Holmes was scheduled to arrive in Myanmar today to help expedite the delivery of aid, according toareport from the UN News Center. As many as 2.5 million people have been ``severely affected'' by the cyclone and need help, the report said.
``We are getting aid through,'' said Costello, the head of World Vision Australia, which has 600 workers packing and delivering clothes, water and medicine to devastated areas. ``But I would liken it to havingathree-inch pipeline of aid trickling when we needa30-meter pipeline pumping.''
To contact the reporters for this story: Nesa Subrahmaniyan in Singapore at nesas@bloomberg.net; Gavin Evans in Wellington at gavinevans@bloomberg.net
နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေကို လူတွေဆီရောက်အောင် ခွင့်မပြုတဲ့အတွက် မြန်မာ စစ်အစိုးရကို ဗြိတိသျှ ၀န်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒန် ဘရောင်း က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချလိုက် ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားနဲ့ NLD ခေါင်ေးဆာင်တွေ နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေး အမြန်လာရောက်ရေး တောင်းဆို
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဖို့အတွက် မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲမှာ ရောက်ရှိ နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေ အပါအ၀င် မကွေးတိုင်းနဲ့ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေက ကြိုဆို လိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးလည်းဖြစ် CRPPခေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးထောင်ကိုထန်းကတော့ သဘာဝဘေးဒဏ်ကျရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေ အမြန်လာဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးတပ်က လူသားချင်းစာနာတဲ့ အထောက်အကူ၊ Humanitarian intervention ပုံစံနဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအနေနဲ့ ဒုက္ခရောက်တဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ကြိုဆို ရမှာပေါ့ဗျာ။ နောက်တောင်နောက်ကျနေပြီ။ အမြန်ဆုံးလာဖို့ ကြိုဆိုရမှာပဲ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက် တာ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းက နိုင်ငံရေး ကြောင့် တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေမုန်တိုင်း မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝအရ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေမုန်တိုင်း ဖြစ်တယ်။ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ ၀င်ရောက် စွတ်ဖက်မှုများ ရှိမလားဆိုတာ။ ဒါက မစဉ်းစားသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်က ယူဆတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူကြီးက နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ နာရီနဲ့ အမျှ သေကြေ ပျက်စီးနေတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ မျှော်လင့်နေတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးကိုလည်း မျှော်လင့်နေတယ်။ တိုင်းပြည်မှာလည်း ကယ်ဆယ်ရေး ကိစ္စမှာလည်း မလုံးလောက်ဘူး။ လူအင်အားလည်း မလုံလောက်ဘူး။ နည်းပညာလည်း မလုံလောက်ဘူး။ ပြည်သူလူထု မျက်နှာကို ထောက်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ဒုက္ခကို ဘယ်တိုင်းပြည်မဆို လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရမှာပဲ။”
မကွေးတိုင်း သရက်မြို့နယ်စည်း ကိုအောင်နိုင်သန်းကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး အမြန်ဆုံးလာဖို့အတွက် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေး တပ်တွေကို အမြန်ဆုံး ၀င်ရောက် လာပြီး အကူအညီတွေ ပေးစေချင်ပါတယ်။ အကူအညီတွေ အမြန်ဆုံးပေးနိုင်ဖို့ရန်လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်အသီးသီးမှာရောက်နေကြတဲ့ အကူအညီပေးမယ့်သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အသီးသီးကို အသိပေးချင်ပါတယ်။”
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်စည်း ဦးမြင့်လွင်ကတော့
“ကျွန်တော်တို့ကတော့ နိုင်ငံတကာ တပ်ဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီလာပေးတဲ့ သူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီ လာပြီး တိုက်ခိုက်မယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ကူညီမယ့်သူဆိုရင် လက်ခံရမှာပဲ။ ဦးဇာဂနာပြောသလိုပဲ အခုချက်ချင်းလာကယ်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ အကူအညီတွေဝင်တာကို အကူအညီ လက်ခံရမယ့်သူတွေက ကြိုဆိုပြီး လက်ခံဖို့ သင့်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အကုန်လုံး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူ တစ်သန်းခွဲလောက်၊ သေသွားကြပြီး၊ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ပြည်သူတစ်သိန်းကျော်ရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ထားပြီးတော့ အကူအညီတွေကို ယူပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ပါ။”
မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့နယ်စည်းအဖွဲ့ဝင် ဦးအေးမြင့်ကတော့
“မြန်မာ့ရေပိုင်နက် အတွင်းမှာ ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာ သိကြတယ်။ အားလုံးက ၀င်စေချင်တဲ့ ပုံစံ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သဘာဝအန္တရယ်ကြောင့် ဒုက္ခသည် သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ သေကြေကြတယ်၊ သန်းနဲ့ချီ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို လူမှုဂရုဏာကိစ္စနဲ့ပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်ကောင်း စေတနာရှိတဲ့သူတိုင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းတဲ့သူတိုင်း ၊လူသားအချင်းချင်း စာနာတတ်တဲ့ လူတိုင်းဟာ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာ၊ ဘယ်တိုင်းပြည် မဆို ကူညီကူညီ ရယူဖို့က အဓိကလိုအပ်တယ်။”
အခုဆိုရင် အမေရိကန် သင်္ဘော သုံးစီးနဲ့ ပြင်သစ်ပိုင် သင်္ဘောသုံးစီး တို့ဟာ မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ရဲ့ အနီးနားမှာ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြင်သစ်ပိုင် သင်္ဘောထဲမှာတော့ စားစရာ တန်ချိန် တစ်ထောင်ကျော်ပါပြီး ဆေးဝါးနဲ့ ဆေးတပ်သားတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ် အငယ်စားတွေ၊ စပိဘုတ်တွေလည်းပါပြီး လက်ပွတ္တာမြို့ကို တစ်နာရီအတွင်းရောက်နိုင်တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ အမိန့်ရတာနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနိုင်တော့မယ့် အကြောင်း ပြင်သစ် သတင်းဌာနတခုကနေ ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန် ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီတပတ်ထဲ သွားရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ဘေးဒဏ်က အသက်မသေ လွတ်မြောက်လာသူတွေအတွက် အကူအညီ ပေးအပ်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရဖက်က အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖိအားပေးမှုတွေ ကြီးထွားလာနေချိန်မှာပဲ အခုခရီးစဉ် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
အတွင်းရေးမှူးချုပ် အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ကြာသပတေးနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီးက တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောဆိုလိုက်တာပါ။